लाखौंको संख्यामा काठमाडौं प्रवेश गरे सलह ! « MNTVONLINE.COM
लाखौंको संख्यामा काठमाडौं प्रवेश गरे सलह !
शनिबार भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको सलह किरा मंगलबार साँझ काठमाडौँको आकाशमा देखिएको छ । सलहको ठूलो हुल काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा पूर्वबाट पश्चिमतिर गएको देखिएको थियो ।
मङ्गलबार पूर्वी दिशाबाट पश्चिमतिर बहेको हावासँगै सलह किरा पनि पश्चिमतिर सरेको अनुमान गरिएको छ । सलह किरा फट्याङ्ग्रा प्रजातिको एक झुण्डमा ९चारदेखि आठ करोड सङ्ख्यामा० उडान गर्ने र ठूलो परिमाणमा खेती वा वनस्पति नष्ट गर्नसक्ने किरा हो । यो किराले हरियो वनस्पतिलाई छोटो समयमा पात र डाँठसमेत खाइदिन्छ ।